Free Download Apple khudbad u Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > Apple khudbad u Mac
Apple taabanaysa isu-diridda waa abuure bandhig aad u ah. Waxaad u isticmaali kartaa in la abuuro bandhigyo aad jeceshahay. Mawduucyada badan oo qurux badan tahay si aad u doorato. Adiga ayaa is gelin kara gooldhalinta iyo miisaska si toos ah iyo iyaga oo wax ka bedel. Sidoo kale, sawiro iyo video clips lagu dari karaa in aad soo bandhigidda la saamaynta kala duwan. Dhammaan waxay ka dhigi bandhigga shaqo la yaab leh in kuwa kale.
By u dumin gujinaya, slide cusub ku daray in ay aad u soo bandhigo. Sidoo kale, waxaad isticmaali kartaa bandhigga waddada fudud. Taabanaysa isu-diridda bixisaa siyaabo badan u fududahay in aad u isticmaasho.
Ka dhig bandhigyo tayo-shineemo
The kala guurka ah bandhigyo ka mid slide in kale waa-tayada shineemo, taas oo aad ka yaabiyo marka aad iyaga daalacanaya.
Si toos ah badbaadin bandhig
Marka aad la abuuro bandhigyo aad, uma baahnid in aad iyaga gacanta badbaadiyo. Taabanaysa isu-diridda si toos ah iyaga ku badbaadin doonaa.
Apple taabanaysa isu-diridda gelineya inaad si ay u abuuraan bandhigyo aad. Waxa aad bixisaa mawduucyada badan oo waafaqayaan shaqada. Sidoo kale, noocyo kala duwan oo saamayn ku siin dareenno kala duwan. Ka dib marka aad dhameysatid bandhigga, waxaad noqon doontaa wax cajiib ah marka aad u dhirtuba.
Apple taabanaysa isu-diridda waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan. Iyadoo jiita sahlan, video clip lagu dari karaa galay bandhigga. Waxaad ku dari kartaa oo keliya ma aha videos, laakiin sidoo kale ku darto gooldhalinta iyo miisaska si ay u gutaan aad soo bandhigidda. Haddii aad rabto in aad dhirtuba shaqadaada, kaliya waxa ay ku dhufo oo markaas ku dhaqaaqdo. Guurka waa mid tayo-shineemo. Waxaad la soo jiidatay doonaa oo la kulmi safar cajiib ah. iCloud ee Apple taabanaysa isu-diridda waa mid aad u awood badan. Waxaa hayaa xawaaraha aad tafatirka. Taas macnaheedu waa Wararka habka tafatirka aad. Apple taabanaysa isu-diridda si toos ah badbaadin karo soo bandhigidda aad xaalkaa. Sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay ugu welwelina halmaamay u badbaadin.
Apple taabanaysa isu-diridda ku siinayaa waayo aragnimo cajiib ah in la abuuro bandhigyo. Waxaad ku jeclaan doonaa haddii aad u isticmaasho.